Idphoto4you dia mampihena ny haben'ny sary ho an'ny Passport online | Vaovao momba ny gadget
Raha tsy mandany vola dia afaka manangona sary haben'ny pasipaoro mora miorina amin'ny tanindrazana sy ny lisitry ny sary ianao eo am-panovana ny sary. Azonao atao ihany koa ny manangona ny sary ho sary habe amin'ny pasipaoro ho an'ny visa na fombafomba hafa ary hanonta sary any an-trano tahaka ny pasipaoro. Izany rehetra izany dia noho ny famoronana sary haben'ny pasipaoro amin'ny Internet IDphoto4You.com manamora ny asan'ny maro.
idphoto4you, dia rindranasa an-tserasera tsotra izay mamela anao hamorona sary pasipaoro miaraka amin'ny fetra haben'ny habeny sy amin'ny Internet nefa tsy mandany vola. Fakan-tsary niomerika fotsiny no ilainao, maka ny sary ianao, mampakatra azy ary manaraka ny dingana amin'ny serivisy Idphoto4you hahazoana ny sary miendrika pasipaoro.
1 Ahoana ny fakana sary haben'ny pasipaoro amin'ny fakantsary nomerika
2 Ny haben'ny sary pasipaoro any Espana
3 Mitovy ve ny sarin'ny DNI sy ny pasipaoro?
4 Fepetra takiana amin'ny pasipaoro any Espana
5 Ahoana ny fomba hanovana sary ho haben'ny pasipaoro an-tserasera (azonao atao ny miresaka momba ny fampiharana na tranokala)
Ahoana ny fakana sary haben'ny pasipaoro amin'ny fakantsary nomerika
Ity misy tendrony kely iray, tokony hanana ambadika fotsy ianao ary hamela toerana malalaka manodidina ny lohany hamokarana ilay sary. Hamarino tsara ihany koa fa tsy misy alokaloka amin'ny endrikao na ny fiavianao, ampiasao koa ny fakantsary amin'ny haavony mitovy amin'ny lohanao.
Aza atsahatra ny fisintomana an'ity rindranasa ity izay hanampy anao hanana lisitra ny sarinao ho an'ny pasipaoro, miaraka amin'ny habeny marina amin'ity fizotran'ny lalàna ity.
Ny haben'ny sary pasipaoro any Espana
Ireo sary ho an'ny pasipaoro any Espana dia tsy maintsy mahafeno andiana takiana hatrany, izay horesahintsika etsy ambany. Na dia iray amin'ireo zava-dehibe indrindra ny haben'ny sary voalaza. Araka ny efa fantatrao angamba, rehefa mankeny amin'ny toerana hakana sary isika, na milina na mpaka sary, dia tsy maintsy faritana amin'ny fotoana rehetra fa natao ho an'ny pasipaoro ireo sary ireo. Satria manana habe manokana izy ireo.
Raha ny amin'i Espana, araka ny natoron'ny governemanta azy manokana, ny haben'ny sary dia tokony ho 35 ka hatramin'ny 40mm ny sakany ary avo ny refy, izany hoe, eo anelanelan'ny 40 sy 53 mm ny haavony. Tsy ekena amin'ny fotoana rehetra fa kely kokoa noho izany ny sary. Ankoatr'izay, ao amin'izy ireo, ny loha sy ny tapany ambony amin'ny vatana dia tokony hipetraka eo anelanelan'ny 70 sy 80% amin'ny sary.
Mitovy ve ny sarin'ny DNI sy ny pasipaoro?
Amin'ny tranga maro dia misy olona izay nampiasain'izy ireo tamin'ny sary roa ireo sary ireo. Mety manana izany sary izany ao amin'ny ID-nao sy ao amin'ny pasipaoronao ianao, noho izany raha azo atao dia azo atao izany. Ny tena izy dia miankina betsaka amin'ny tranga tsirairay avy, satria rehefa manavao ny DNI dia misy sary vaovao angatahina foana, izay tsy mitovy amin'ny teo aloha. Raha nanavao ny DNI ianao ary avy eo hanavao ny pasipaoro dia azo inoana fa avelany hampiasa ny sarin'ny DNI ianao. Saingy tsy zavatra mitranga amin'ny tranga rehetra izany.
Raha ny sary ID dia matetika napetraka fa ny habe izay tsy maintsy manana dia 32 amin'ny 26 milimetatra. Ity no aseho amin'ny tranonkala ofisialin'ny Minisitera. Izany no mahatonga azy ireo matetika kely kokoa noho ny pasipaoro. Fa indraindray misy sary izay nampiasainay ho an'ny DNI dia avelany hanavao ny pasipaoro izahay.
Fepetra takiana amin'ny pasipaoro any Espana
Araka ny efa noresahintsika teo aloha, matetika ny sary pasipaoro dia misy fepetra takiana amin'ny raharaha Espana. Raha tsy feno ireo takiana ireo dia tsy ho azo ampiasaina ny sary ary tsy hoekena. Lafiny ifotony ireo, saingy zava-dehibe ny fanarahana na ahoana na ahoana, hisorohana ny olana amin'ny sary voalaza. Inona no tokony hataonao?
Sary farany: Tsy afaka mihoatra ny 6 volana
Ny loha sy ny tapany ambony amin'ny vatana dia tokony hipetraka eo anelanelan'ny 70 sy 80% amin'ny sary
Ny ao ambadika dia tsy maintsy ho fotsy sy fanamiana
Ny sary dia tsy maintsy miloko sy afovoany
Tokony hatao pirinty amin'ny taratasy misy kalitaon'ny sary
Tokony hiala ilay olona mijery mivantana ny fakantsary
Tsy maintsy misokatra ny maso ary raha ampiasaina ny solomaso dia tsy maintsy vita amin'ny vera mazava
Ny sary misy satroka, satroka, fehiloha na visor dia tsy ekena
Amin'ny tranga mitafy voaly dia tsy maintsy afaka mahita tsara ny endrikao ianao amin'ny tranga rehetra
Ho an'ireo sarin-jaza izay tsy maintsy tazonina amin'ny lohany dia tsy misy tanana hita mihazona ny lohany
Ahoana ny fomba hanovana sary ho haben'ny pasipaoro an-tserasera (azonao atao ny miresaka momba ny fampiharana na tranokala)
Raha efa manana sary ianao fa tsy ao anaty endrika takiana dia afaka miloka isika amin'ny famadihana azy. Ka efa ananantsika sary iray izay mifanaraka amin'ny fanontaniany amintsika ao amin'ny pasipaoro. Mba hanaovana izany dia afaka mampiasa pejin-tranonkala na rindranasa izahay, izay manampy anay hanova ny habeny. Misy safidy maro, satria na ny fampiasana fitaovana toa an'i Paint aza dia afaka manampy, raha efa fantatsika ny fandrefesana hampiasaina amin'ilay sary voalaza.
Iray amin'ireo safidy feno indrindra ny Visafoto, azonao tsidihina amin'ity rohy ity. Amin'ity tranonkala ity dia azo atao ny mamorona sary ho an'ny pasipaoro, ID na visa any amin'ny firenena maro. Ka mifanaraka mora amin'ny zavatra rehetra tadiavintsika amin'io lafiny io izany. Mila mampakatra sary fotsiny isika, izay mety misy background aza. Misaotra an'ity tranonkala ity fa afaka mamadika ny sary ho lasa sary pasipaoro tonga lafatra isika.
Raha fampiharana ho an'ny Android no tadiavinao, misy ihany koa ny safidy azo atao. Manana fampiharana antsoina hoe Passport ID Photo Editor izahay, ahafahanao mamorona sary mora foana ho an'ny ID na pasipaoronao. Mora ampiasaina ilay app, mila mampakatra sary fotsiny ianao ary manitsy azy. Azonao atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny Android eto ambany:
Tonian-dahatsoratry ny pasipaoro sy visa ID
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Idphoto4you dia mampihena ny haben'ny sary ho an'ny Passport online
Nathan Saavedra dia hoy izy:
Misaotra tamin'ny lahatsoratra. Izaho dia nitady hoe aiza no hakako sary anaty antontan-taratasy nandritra ny halaviran'ny fiaraha-monina. Ho an'ny toroheviny dia nampiasa sary Visa izy. Manomboka izao dia hoentiko an-tserasera fotsiny ireto sary ireto, mety tokoa!
Valiny tamin'i Natán Saavedra